Fanamboaran-trano anatiny - Designer fananganana trano fisakafoanana - Nobili Interior Design, Studio, Architect, Designer, Firms, Designs, Prices
Ny foto-kevitra ny Atitany famolavolana sy fandrafetana foana ao ambadik'io hafatra amin'ny fanomanana ny fanaovana drafitra sy ny stylistic vahaolana, ary napetraka ny sary 2d ho an'ny orinasa endrika anatiny, izy ireo no ho vato fehizoron'ny asantsika sy ny fototry ny fahombiazana haingony tatỳ aoriana. In ity sokajy ity Ny vidin'ny rafitra anatiny dia nanisy fiheverana manokana momba ny famaritana lahatsoratra maromaro ho an'ny tolotra omen'ny birao ny trano fandraisam-peo sy ny rafitra anatiny. Amin'ny faran'ny pejy dia nanome fampahalalana mahasoa ho an'ny mpanjifa izay hisafidy ny famolavolan'ny trano fandraisam-bahiny, fampahalalana momba ny fahafahana mety amin'ny fanovana hatao taorian'ny famolavolana drafitra anatiny. Ny portfolio an'ny tetikasa fanorenana trano fanorenana trano manan-danja amin'ny gorodona, trano maoderina manana loka isan-karazany dia miankina amin'ny fomba nofidiana sy ny hamafin'ny tetikasa.
Ny vidin'ny trano famolavolana trano fandraisam-bahiny
Famolavolana trano fanokanana trano fandraisam-bahiny
Ny vidin'ny rafitra anatiny - ny trano fandraisam-bahiny dia manamboatra trano maoderina maoderina
Ny tetikasa fanorenana rehetra ataon'ny studio Nobili Interior Design dia zon'ny mpamorona ny mpanao mari-trano sy ny matihanina endrika noforonina araka hentitra tompon'ny voafaritra (trano, trano fomba mahazatra ankehitriny, birao sy ny karazana trano fianakaviana.) Araka ny tian'ny manokana ny mpanjifa, izay mifandray amin'ny tetikasa efa fifanarahana atitany famolavolana amin'ny fitsipika tahan'ny na turnkey tetikasa miaraka ny mety hisian'ny fanaterana ny fitaovana voatanisa ao anatiny famolavolana tetikasa sy ny manara-maso 3d Earthworks teo amin'ilay toerana. Jereo ny sarintany tetikasa atitany endrika izay namoaka fampahalalana fanampiny mba hahazoana antoka fa vidin-javatra Atitany famolavolana ny trano sy ny trano vita amin'ny Noble Atitany Design no azon'ny mpanjifa ny hoavy sy ny tetikasa tahirin-kevitra izay natao noho ny ekipa mpanao mari-trano, endrika, ny fandaharam-potoany amin'ny fanazavana mora sy mora azo. Na inona na inona karazana fanompoana ny Atitany endrika ho voalohany izay nifidy, dia mety hanafatra Premium fanampiny fanompoana dia ahitana ny fanohanana tanteraka ny orinasa eo amin'ny fikatsahana ny Atitany endrika miasa araka ny natao 3d. Fanohanana amin'ny fifidianana sy ny endrika anatiny amin'ny fanorenana mafy no nanome antsika maimaim-poana avy. Ny tena miharihary, mampiditra ianao rehefa mifidy ny fanompoana endrika atitany trano na efitra dia ny vidin'ny ny tetikasa. Kendrena Price Villa an-trano anatiny tetikasa endrika 17-25 euro isaky ny metatra toradroa ny trano sy 25-40 euro isaky ny metatra toradroa. Tariffs ny orinasa an'ireo trano isan-karazany sy ny olona manam-pahaizana manokana amin'ny endrika anatiny dia sarotra ny mampitaha noho ny fahasamihafana lehibe ny asa, sy ny maha samy hafa ny antontan-taratasy natao misy ny farany endrika tetikasa atitany (tsy lazaina intsony ny tsy manam-paharoa famolavolana foto-kevitra tonga saina ary tsy ny kely indrindra ny hatsaran'ny fitaovana isan-karazany, izay niasa tamin'ny famolavolana ny atitany hevitra). Manantena izahay fa ny tsipiriany momba ny tolo-kevitra sy ny fomba fiasa noho ny fikajiana preturlui endrika anatiny tetikasa ho an'ny trano na trano any Constanta, Bucarest, no Ploiesti Brasov sy hanamora tokoa ny fanapahan-kevitra. Ny zava-dehibe ho an'ny fampandrosoana ny asa izay tetikasa trano anatiny, na trano fa hampihatra didim, ankoatra ny fanompoana ny fitsipika nividy miovaova arakaraka ny takian'ny sy be pitsiny ny tetikasa ary ho ampitaina misaraka tombontsoa. Ho hitanao ato amin'ity sokajy endrika anatiny tetikasa lafo vidy ho an'ny trano mahazatra efitra ambanin'ny tafo tantara ity tranon'ny Mediterane ankehitriny fomba raitra natao ho an'ny karazana trano manerana ny firenena amin'ny vidin-javatra eo 17-30 euro isaky ny metatra toradroa amin'ny tanàna toy ny Bacau, Iasi, Suceava, Buzau, Craiova, Giurgiu, Focsani, Piatra Neamt, Braila, Tulcea sy Galati.
Fanamboaran-trano anatiny - Sarin'ny trano fandraisam-bahiny mpikaroka